ဒါရိုက်တာဝိုင်းလို သင်ပြပေး တဲ့ ဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့တာ ကံ ကောင်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့ သ ရုပ်ဆောင်/အ? - Yangon Media Group
ဒါရိုက်တာဝိုင်းလို သင်ပြပေး တဲ့ ဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့တာ ကံ ကောင်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့ သ ရုပ်ဆောင်/အ?
”ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာ စိုးတာကြောင့်မို့လို့ ဇာတ်ကားတွေ လိုက်ရိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ မေ
မေး-အခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ် ရှားမှုအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေ လဲ။
ဖြေ-အခုကတော့ ”ပုံရိပ်”ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမှာ ပါဝင်သရုပ် ဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒီဇာတ် ကားမှာ မေ့ရဲ့ကာရိုက်တာက ရိုး ယဉ်တဲ့မိန်းကလေး၊ နည်းနည်း ကြောက်တတ်တဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက် အလင်းရောင်၊ ကိုကျော်ကျော်ဗိုလ်တို့ရဲ့ သူငယ် ချင်းကောင်မလေးအဖြစ် သရုပ် ဆောင်ရမှာပါ။
မေး-”ပုံရိပ်” ဇာတ်ကားအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ။
ဖြေ-ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကတော့ အဝတ်အစားပိုင်းကို ရိုးရိုးယဉ် ယဉ်လေးတွေပဲဝတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထား ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေက တော့ အိုက်တင် သရုပ်ဆောင် ပိုင်းပြင်ဆင်မှုတွေပဲ လုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကို လည်း သေချာဖတ်ထား ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်း ကိုတော့ ရိုက်ကွင်းကို ရောက်မှ ဒါရိုက်တာနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ လုပ် သွားမယ်။။
မေး-ဇာတ်ကားတစ်ကားကို လက်ခံရင် ဘယ်လိုအချက်တွေ ကိုကြည့်ပြီးလက်ခံလဲ။
ဖြေ-မေ ကဇာတ်ကား ရိုက်ကူး မှုမှာဆိုရင် အပြိုင်နေရာကပဲဖြစ် ဖြစ် အဓိကက ကိုယ်ဘာလုပ်ပြ နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး ရွေးချယ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာစိုး တာကြောင့်မို့လို့ ဇာတ်ကားတွေ လိုက်ရိုက်နေတာမျိုးလည်း မဟုတ် ပါဘူး။
မေး-”သတို့သမီး” ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း ပြောပြ ပေးပါ။
ဖြေ-”သတို့သမီး”ဇာတ်ကားက လည်း ဒီလ ၂၈ ရက်နေ့ ရုံတင် တော့မှာပါ။ အဲဒီဇာတ်ကား လေးကို မေတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အ ချိန်မှာလည်း တော်တော်လေးကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဇာတ် လေးကလည်း ကောင်းတယ်။ ကိုယ်ဇာတ်ကားမို့လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနှစ်ရဲ့ နောက် ဆုံးလလေးမှာတော့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကားလေးတစ်ကားဖြစ်မှာပါ။အဲ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ညီမက ပူ လောင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
မေး-ဒါရိုက်တာဝိုင်းနဲ့အတူ ရိုက် ကူးရတာဆိုတော့ ဘာတွေလေ့ လသင်ယူခဲ့ရလဲ။
ဖြေ-ကိုဝိုင်းက မေ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီး သင်ပေးပါတယ်။ အဲဒီဇာတ် ကားမှာဆိုရင် မျက်ရည် ကျရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တွေများတယ်။
ဇာတ်ကားရိုက် ကူးနေရင်းနဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ ရိုက်နေတုန်း တစ်ရက်မှာ ကိုယ်ကလည်း အိပ်ရေးတွေလည်း ပျက်နေတာကြောင့် မျက်ရည်ကမထွက် ဘူး။ မနက် ၁ဝ နာ ရီလောက်တည်းက
တော့ နေ့လယ်ဘက်ထိရောက် သွားတယ်။ ကိုဝိုင်းကလည်း မျက်ရည်အတုမသုံးချင်တော့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ပေးပါ တယ်။ ကိုယ်ကလည်း ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့သားတွေ အကုန်ထမင်းစား ချိန်ရောက်နေပြီ။ ကိုယ်ကမရသေး ဘူးဆိုတော့ ပိုအားနာပြီး မျက် ရည်ကမထွက်၊ အဲဒါနဲ့ ကိုဝိုင်းက အားမနာနဲ့ အေးဆေးလုပ်လို့ အားပေးပါတယ်။ ကိုဝိုင်းက သေ ချာကိုသင်ပေးပါတယ်။ မေက ကိုယ့်ကို အဲဒီလိုသင်ပေးတဲ့သူမျိုး နဲ့တွေ့တာ ကံကောင်းပါတယ်။ ပိုလည်းဝမ်းသာရပါတယ်။ ကိုယ် က သင်တန်းတွေလည်း မတက် ဖူးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို ဒီလိုမျိုးတွေသင်ပေးတော့ ပိုပြီး တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ တိုးတက် တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။
မေး-အဆိုပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တော့ရော ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ရှိလဲ။
ဖြေ-သီချင်းအသံသွင်းပြီး အင် တာနက်ပေါ်တင်ဖို့ရှိပါတယ်။ မေ အခုချောင်းဆိုးနေတာကြောင့် အသံသွင်းဖို့ ခက်နေလို့မလုပ်ဖြစ် သေးတာပါ။ ဒီ ”ပုံရိပ်” ဇာတ်ကား ရိုက်ပြီးရင် နောက်ဇာတ်ကားတစ် ကား ဆက်ရိုက်ရဦးမှာဆိုတော့ ကြားထဲ ရတဲ့အချိန်မှာအသံသွင်း နိုင်ရင်တော့ နောက်လလောက် အွန်လိုင်းပေါ်တင်မယ်။ သီချင်း ပုံစံလေးကတော့ အဆွေးသီချင်း လေးပါ။ ကိုယ်တိုင်က အဆွေးသီ ချင်းလေးတွေကြိုက်တယ်။
'၂ဝ၁၈ က ကျွန်တော့် အတွက် ကံကောင်းမှုတွေရတဲ့ နှစ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်' အောင်ထက်